Masturbation ny tanora
Ny fahazoana zaza efa lehibe ho an'ny "fibebahana" sy "mampidi-doza" toy ny fitsaboana, maro ny ray aman-dreny manomboka manahy, manara-maso sy mampihorohoro ny taranaka, tsy mieritreritra ny vokatry ny fitondran-tenany. Ary raha tena mampidi-doza ny fialonana amin'ny tovovavy, raha ny tena marina, inona no mahatonga azy, ary ahoana no fomba fitondrantena araka ny tokony ho izy rehefa mianatra momba ny fahazarana "mampidi-doza amin'ny zanaka lahy na zanaka vavy ianao? - Aleo liana ny hevitry ny manampahaizana manokana.
Masturbation amin'ny fahazazana
Ny fiterahana amin'ny taonan'ny fahamaotiana dia fisehoan-javatra betsaka. Ny fahafoizan'izy ireo ny filàn'ny filany ara-nofo dia mandray anjara amin'ny 8-9 amin'ny zatovo folo, - manamarika ny mpandalina ara-pananahana ao amin'ny fianaran'izy ireo. Ny manam-pahaizana ihany koa dia nanaporofo fa ny fibodoana dia tsy miteraka aretina ara-pihetseham-po sy ara-batana, afa-tsy amin'ny trangan-javatra izay mahatonga ny fitsaboana ho lasa aretina. Izany hoe, manomboka mihisatra matetika ny zatovo iray, ny fahafaham-po dia atao amin'ny fomba tena miavaka, na rehefa manolotra fialamboly aloha ny firaisana ara-nofo amin'ny namana iray. Amin'ny toe-javatra hafa, ny fientanam-pandrenesan'ny taova sy ny orgasme, vokatry ny fanentanana ara-batana, dia heverina ho ara-dalàna sy azo antoka ho an'ny zatovolahy sy zatovovavy eo amin'ny sehatry ny fahamaotiana. Ny fikolokoloana ny tanora, ny ankizilahy sy ny tovovavy, dia vokatry ny fanitsiana hormona, fampivoarana ara-pananahana haingana sy haingana. Fantatra fa io vanim-potoana mitombo io dia miaraka am-pihetseham-po mahery vaika, fitarihana ary traikefa. Masturbating, ny zatovo dia mahazo fitsaboana manokana, mampihena ny adin-tsaina ara-pihetseham-po sy ara-pihetseham-po, ambonin'izany, noho izany dia mahazo ny traikefa voalohany ilay zaza, izay hanampy azy hisoroka ny tahotra sy ny tsy fandriampahalemana mandritra ny firaisana ara-nofo amin'ny namana. Ny mpahay siansa dia nanaporofo fa ny fitsaboana amin'ny fiterahana dia tsy mitarika amin'ny karazam-pihetseham-po isan-karazany, toy ny tsy fahampiana amin'ny lehilahy na ny tsy fahampian'ny vehivavy, ka ny ray aman-dreny dia tsy tokony hanahy, ary hampangorohoro ny ankizy amin'ny "tantara mampihoron-koditra" hatramin'ny lasa.
Fihetsiky ny tovovavy amin'ny resaka psychologie
Ny teoria dia manimba ny fiterahana, avy amin'ny taonjato maro. Na dia tany am-piandohan'ireo taonany aza, ireo zatovolahy izay nirotsaka tamin'ny filaharam-batana dia noroahina tany amin'ny fiaraha-monina, tsy navela hanana zo hamorona fianakaviana izy ireo ary hametra ny toeran'ny maha-raim-pianakaviana sy ny fahalemena. Efa nieritreritra ihany koa taloha fa ny olona masturbation dia mandany ny herim-pony sy ny heriny, ka lasa osa sy miparitaka. Io toerana io dia miorina mafy amin'ny fiarahamonina, ary satria "tsy misy mihitsy aza ny firaisana ara-nofo" ao amin'ny Firaisana Sovietika ankehitriny, dia sarotra ho an'ny ray aman-dreny maro ny mandinika indray ary manaiky fa efa tsy azo ihodivirana ny fifindran'ny taovam-pananahana, ary heverina fa ara-dalàna sy ara-boajanahary eo amin'ny fomba fitomboany ankizy.
Ahoana no hananana hazo iray ao an-tsekoly?
Halloween fifaninanana ho an'ny zatovo
Ny vanim-potoanan'ny puberta
Fianakaviana ho an'ny ankizy
Fitsaboana ara-pahasalamana ny ankizy alohan'ny fianarana
Ankizy-lohataona ho an'ny zazavavy
Mastitis amin'ny alika
Jama dia navadika tamin'ny taolana - recipe
Ny isan-karazany voatabia voatabia, inona izany - inona ireo tombontsoa sy ny tombony azony?
Modely skirt 2013
Mastectomy ho an'ny Madden
Sisintany havia miankavia
Firahalahiana mandritra ny fahavaratra, mandritra ny fahavaratra
Ranjeo mofo eo amin'ny lafaoro ao anaty mofo
Kilonga inona no misafidy ny lakozia - misoroka ny fahadisoana rehefa mividy
Andory Ski Resort
Pumpkin Fandoroana akoho
Dadabe 12 tsara tarehy miaraka amin'ny zanaka vavy, manaja ny fitafiana
Noho ny fanasana kristaly mba hamirapiratra - ny fomba tsara sy ny fomba tsara indrindra